कार्पेट कलर ट्रेन्ड्स – घरका लागि उत्तम कारपेट छनौट गर्न सल्लाह - Carpet Color Trends
Home » कार्पेट कलर ट्रेन्ड्स – घरका लागि उत्तम कारपेट छनौट गर्न सल्लाह
कार्पेट कलर ट्रेन्ड्स – घरका लागि उत्तम कारपेट छनौट गर्न सल्लाह
कार्पेट एउटा सजावट हो जुन प्रायः प्रत्येक घरमा हुन्छ। ताकि चयन सहि छ, पहिले तल उत्तम कार्पेट छनौट गर्न को लागी सुझावहरु मा ध्यान दिनुहोस्। ठिक छ, के तपाईंलाई थाहा छ हरेक घरले कालीन प्रयोग गर्दछ?
अब तपाई कोठाको वातावरणमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ जुन कार्पेट भन्दा फरक हुनेछ। यो छनौट गरिएको कार्पेटको रंग र मोटिफमा पनि निर्भर गर्दछ। यस्तो हुन्छ कि तपाईं सजिलैसँग विभिन्न प्रकारको कार्पेटहरू प्रयोग गरेर घर सुन्दर बनाउन सक्नुहुन्छ। घरको लागि उत्तम र सही प्रकारको कार्पेट प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ? तलको कार्पेट छनौट गर्न सुझावहरूको लागि हेरौं।
तपाईंको लागि कार्पेट कलर ट्रेन्ड्स आईडियास
तपाईलाई कुन कार्पेट सामग्री थाहा छ? स्पष्ट रूपमा, त्यहाँ पाँच कालीन सामग्रीहरू छन्, तपाईंलाई थाहा छ। कहिलेकाँही हामी वास्तवमै कस्तो प्रकारको थाहा नहुँदै कार्पेटहरू चाहेको रूपमा किन्छौं। यहाँ कालीन र कारपेट र Color्ग प्रवृत्ति को पाँच प्रकार छन्।
उज्यालो रंग जुन अधिक तटस्थ छ हल्कापनको छाप ल्याउँछ र कोठामा मिश्रण गर्न सजिलो हुन्छ
Ark गाढा र colorsहरू
गाढा र colors्गले भारी छाप प्रस्तुत गर्दछ तर कोठामा अधिक रमणीय हुन्छ
हडताल गर्ने रंगहरू
पहेंलो र गुलाबी जस्तो स्ट्राइकि colors रंगहरूले कोठामा अधिक जीवन्त, हंसमुख र तटस्थ भावना ल्याउँदछ
As खरानीको रंग
खरानीको रंगले कुनै पनि स्थानमा सौंदर्य ऊर्जा प्रदान गर्न सक्छ
निलोले मेलमिलाप र सुखदायक हृदयको प्रभाव दिन्छ
रातो रंगले कामुकता, उर्जा र इच्छाको प्रतीक हो
प्रकृतिको हरियो सूक्ष्मताहरूले शीतलता, विश्राम र मेलमिलापको वातावरण प्रदान गर्न सक्छ कि दिमागलाई सजिलो बनाउन सक्छ
सेतो रंगले स्वच्छ, सादा र शुद्धको छाप प्रस्तुत गर्दछ
। कालो रंग
कालो र color परिप्रेक्ष्य, गहिराई र एक सानो रहस्यको छाप प्रस्तुत गर्न धेरै उपयुक्त छ
कार्पेट रंग प्रवृत्ति र प्रकार जुन तपाईंको कोठाको साथ उपयुक्त छ
कोठामा कालीनको प्रभाव केवल यसको कार्यको लागि वा सजावटको रूपमा होइन। सही कार्पेट र colorको त्यो छनौटको लागि वातावरण र यसको स्थापना पछि कार्यको निर्धारण गर्न धेरै आवश्यक हुन्छ। किनभने यस कार्पेटको र्ग वातावरणमा बाँच्न र कोठामा सौन्दर्य मान थप्न सक्षम छ।
# १: ऊन कार्पेटको प्रकार
तपाईं पक्का निश्चित रूपमा सहमत हुनुहुन्छ कि यो एक घटक सबैभन्दा सहज सामग्री हो। ऊनबाट बनेको कार्पेटमा रहेको कल्पना गर्नुहोस्। वाह, यो धेरै सहज हुनेछ। यसको सान्त्वना संग, ऊन कालीन पक्कै महँगो छ। महँगो भए पनि, यहाँ केहि फाइदाहरू छन्:
Urable टिकाउ मोटाई
Urable टिकाऊ रंग
Use प्रयोग गर्न धेरै सहज छ
ऊन कार्पेट कसरी सफा गर्ने? सजिलो, तपाईं मात्र एक वैक्यूम क्लीनर वा ड्राई क्लीनिंग को उपयोग गर्न आवश्यक छ।
# २: रेशम कालीनका प्रकारहरू
कसलाई रेशम थाहा छैन? ऊनको तुलनामा यो एक सामग्री पक्कै बढी सान्त्वना प्रदान गर्दछ। यसको धेरै नरम बनावटले रेशमलाई अत्यन्त विलासी बनाउँदछ। त्यसोभए, यो सुरुचिपूर्ण कालीन कसरी सफा गर्ने? ऊन कार्पेट सफा गर्न मिल्दोजुल्दो, रेशम कालीन पनि भ्याकुम क्लीनर प्रयोग गरेर सफा गरिन्छ।
#:: Polypropylene कालीन सामग्रीका प्रकारहरू
कृत्रिम रगहरू मन पर्छ? यदि हो भने, तपाईले पोलिप्रोपाईलिन वा पीपी कार्पेटको प्रकार छान्नु पर्छ। यद्यपि सिंथेटिक सामग्रीबाट बनेको छ, यस प्रकारको कार्पेटको मिठो बनावट छ। यो सिंथेटिक सामग्री बाट बनेको छ, पक्कै पनि मूल्य एकदम सस्तो छ। त्यहाँ एक मूल्य छ, त्यहाँ सामानको गुणस्तर छ।
यो Polypropylene कालीनहरूमा पनि लागू हुन्छ। यस प्रकारको कारपेट बनाउन मूल्य सस्तो छ धेरै कमेटीहरू छन्। यहाँ तपाईं कम कमजोरीहरू जानुहोस्:
र fast्ग द्रुत लुप्त हुँदैछ
कालीन धागो सजीलो छील छ
विशेष गरी यो कार्पेट सामग्रीको लागि, तपाईं यसलाई पानी प्रयोग गरेर धोउन सक्नुहुन्छ।
#:: नायलन कालीनका प्रकारहरू
यस प्रकारको कार्पेटको पोलिप्रोपाइलिन कार्पेटसँग समानता छ। समानता कार्पेट सामग्रीमा छ। जे होस्, नायलॉन सामग्री Polropropylene सामग्रीको एक स्तर माथि छ। यो ऊन जस्तै सामग्रीबाट महसुस गर्न सकिन्छ।
ठिक छ, यस प्रकारको नायलन कार्पेट तपाईंको लागि उपयुक्त हुन्छ जो एक उज्ज्वल वातावरण मनपर्दछ। किन? सामान्यतया, नायलन कार्पेटको प्रकारको स्ट्राइकि। रंग हुन्छ। अघिल्लो प्रकारको कार्पेट जस्तो समान सामग्री भएको, नायलन कार्पेट पनि पानी प्रयोग गरेर धुउन सकिन्छ।
#:: सिसाल कार्पेटको प्रकार
यो एक सामग्री अझै पनि धेरै मानिसहरूलाई अपरिचित हुन सक्छ। सिसाल सामग्री के हो? यो नामले सlies्केत गर्दछ कि यो एक कार्पेट सामग्री सिसल भनिने बोटबाट आउँदछ। प्राकृतिक सामग्रीले कार्पेट बनावटलाई अझ धनी बनाउँदछ। अवश्य पनि, यसले सिसल कार्पेट प्रयोग गर्न धेरै सुरक्षित गर्दछ।
उपचार कस्तो छ?
S पानी प्रयोग गरेर सिसाल कार्पेट कहिले पनि नधोनुहोस्
A केवल भ्याकुम क्लीनर प्रयोग गरेर कार्पेट सफा गर्नुहोस्
That’s अब त्यो कार्पेट सामग्रीको पाँच प्रकार हो
#:: कार्पेटका प्रकारहरू जुन काठसँग मिल्दोजुल्दो छ
यसलाई विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, टेक्नोलोजिकल परिष्कार पनि कार्पेटमा प्रवेश गरेको छ। प्रमाण यो छ, अब त्यहाँ कार्पेट छ जुन भुँडीसँग मिल्दोजुल्दो छ। हो, यस कार्पेटको उपस्थिति काठ, संगमरमरको जस्तो देखिन्छ, र केहि सिरेमिकहरू जस्तै छन्। यदि तपाईं यस जस्तो कार्पेट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, कोठाको प्रत्येक कुनामा ठूला ऐनाको प्रयोगको साथ यसलाई मिलाउनु उत्तम हुन्छ।
किन? ऐनाको अस्तित्वले अवस्थित ठाउँ भेस गर्न सक्दछ। कोठा बढी प्रशस्त देखिनेछ र कार्पेट बाहिर खडा हुनेछ।
त्यसो भए, यो तपाईंको लागि कार्पेट र Color्ग ट्रेन्डहरूको बारेमा हो। म आशा गर्दछु कि यो जानकारी तपाईका लागि उपयोगी छ। तपाईं आफ्नो मनपर्ने कारपेट र Color्ग ट्रेन्डको साथ सबै कालीन विचारहरू अन्वेषण गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो भए, सही कार्पेट छनौट गरेर आफ्नो प्रिय घर सजावटको आनन्द लिनुहोस्!
Color Of The Year Cavern Clay Dinin
Yellow Colour Curtain With Beige So
Painting Walls Different Colors Wit
Aluminum Window Frame Colors With B